ပါဝါ:0.37kw + 0.37kw
စွမ်းရည်:400~ 800bag / h
အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်:စပါးထုပ်ပိုး ,လုံးလေးထုပ်ပိုး,granular ထုပ်ပိုး
အလိုအလျောက်အစာကျွေးတောင့်ထုပ်ပိုးစက်အသစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးထုပ်ပိုးစက်ဖြစ်ပါတယ်,ဒါကြောင့်အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာအလိုအလျောက်ချမှတ် & ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ - နည်းပညာရှင်. ၎င်းကိုအစာတောင့်များအလေးချိန်နှင့်ထုပ်ပိုးရာတွင်အဓိကအသုံးပြုသည် လုံးလေးများကျွေးပါ အလုပ်သမားအင်အားကိုချွေတာရန်. ပုံမှန်အားဖြင့်, အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်းလုံးလေးထုပ်ပိုးစက်ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခါးပတ်နှင့်အပ်ချုပ်စက်တို့နှင့်အမြဲပေါင်းစပ်ထားသည် ,တိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများတွင်အသုံးပြုသောအလိုအလျောက်အစာတောင့်အလေးချိန်နှင့်ထုပ်ပိုးစနစ်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်.
အလိုအလျောက်လုံးလေးအလေးချိန်ထုပ်ပိုးစက်သည်အကြီးစားနှင့်အလတ်စားအစာတောင့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများအတွက်သင့်တော်သည်. feed pellet packing machine သည်အလိုအလျောက်အလေးချိန်နှင့်ထုပ်ပိုးစနစ်သို့အမြဲတမ်းအသုံးပြုသည်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယန္တရားနှင့်အပ်ချုပ်စက်နှင့်အတူပေါင်းစပ်. အလိုအလျောက်အစာကျွေးသည့်တောင့်တင်းအလေးချိန်ထုပ်ပိုးစက်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည် ,ထိုကဲ့သို့သော feed ကိုလုံးလေးများအဖြစ်, သစ်သားလုံးလေးများ, ဘောဇဉ်,ကောင်းမွန်သောစီးဆင်းမှုရှိသည့်ဓာတ်မြေသြဇာနှင့်အခြားအမှုန်များနှင့်အမှုန့်ပစ္စည်းများ. အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ, ၎င်းကိုကြီးမားသောအစာတောင့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံကြီးများကမွေးစားခဲ့သည်.
အလိုအလျှောက် Feed Pellet အလေးချိန်ထုပ်ပိုးစက်၏အင်္ဂါရပ်များ
2.အလိုအလျောက်လုံးလေးများထုပ်ပိုးစက်သည်မြင့်မားသောတွက်ချက်မှု၏အားသာချက်များရှိသည်, တည်ငြိမ်သော function ကို, ဒစ်ဂျစ်တယ်သရုပ်ပြခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေး.
3.ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုတပ်ဆင်ခြင်း, အစာတောင့်အလေးချိန်နှင့်ထုပ်ပိုးစက်ထိန်းချုပ်မှုဒေတာ setting ကိုရရှိနိုင်ပါသည်,အမြင့် Auto- ပြုပြင် drop, အလိုအလျောက်ထောက်လှမ်းမှုအမှား.
4.အဆိုပါ duple အလေးချိန်အလုပ်လုပ် system ကိုချမှတ်ခြင်း. အလေးချိန်နှစ်ခုသည်တစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်စေ၊ တစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေအလုပ်လုပ်နိုင်သည်, သောအစာကျွေးခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးစက်၏အလုပ်လုပ်ထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်.
5.အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်သောအာရုံခံကိရိယာနှင့်အအေးခန်းကိုအသုံးပြုခြင်း, အစာတောင့်အလေးချိန်နှင့်ထုပ်ပိုးစက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်လုပ်သည်, မညစ်ညမ်းမှုနှင့်အတူ.
6.အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်သည်ပလတ်စတစ်မှုတ်လိမ်းသည့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်သည်အဆင့်မြင့်သံမဏိပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည်, သံချေးခြင်းနှင့်ချေးခြင်းများကိုကာကွယ်ခြင်းဖြင့်စက်၏သက်တမ်းကိုကြာရှည်စေသည်.
အလိုအလျောက်လုံးလေးထုပ်ပိုးစက် parameters တွေကို
မော်ဒယ် အလေးချိန်အကွာအဝေး ထုပ်ပိုးစွမ်းရည် ထုပ်ပိုးတိကျမှန်ကန်မှု အရွယ်အစား
VTDCS25 5-25ကီလိုဂရမ် 500-900အိတ် / နာရီ ± 0.2-0.5% 720X630X2600mm
VTDCS50 25-50ကီလိုဂရမ် 400-800အိတ် / နာရီ